कोरोनाको खोप ल्याउने अनुमति पाएका तीन निजी कम्पनी के गर्दैछन् ? – Nepal Press
कोरोनाको खोप ल्याउने अनुमति पाएका तीन निजी कम्पनी के गर्दैछन् ?
२०७८ असार २३ गते १७:३८
काठमाडौं । सरकारले तीनवटा निजी कम्पनीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अनुमति दिएको छ । तर, ती कम्पनीहरू कहाँबाट कसरी खोप ल्याउने भन्नेमा अलमलमै छन् ।
औषधी व्यवस्था विभागले ३ महिनाअघिदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन आवेदन दिएका ३ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । अनुमति पाएका कम्पनीले छिमेकी देशका उत्पादकसँग खोप ल्याउनका लागि कुरा गरिरहेका छन्, तर सफलता मिलेको छैन ।
हुकुम डिष्ट्रव्युसन, इम्रोल्ड फर्मा र लोमस फर्माले विदेशबाट कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अनुमति लिएका हुन् । ती कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने भनेर केहीअघि नै अनुमति लिएको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार तीमध्ये हुकुम र लोमसले कोभिसिल्ड खोप ल्याउन अनुमति लिएका हुन् ।
नेपाल औषधी व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले भने, ‘अनुमति लिएका निजी कम्पनीले खोप आयातका लागि के-के गरे भन्ने विभागलाई जानकारी भएको आएको छैन । खोप आयात भएपछि जानकारी आउला ।’
इम्रोल्ड फर्माले भारतबाट कोभिसिल्ड ५ लाख डोज ल्याउनका लागि पहल थालेको जानकारी दिएको छ । फर्माका सञ्चालन सुरेन्द्र नायकले नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अनुमति दिएदेखि नै पहल गरेको बताए ।
उनले भने, ‘औषधी व्यवस्था विभागले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अनुमति दिएपछि हामीले खोप उत्पादक कम्पनीसँग कुरा गरिरहेका छौं । भारतीय दूतावसलाई सरकारले पनि निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउन अनुमति दिएको भनेर जानकारी दिइसकेको छ । हामीले भारतीय कम्पनीसँग खोप अर्डर गरेको पनि ३ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, भारतले आफ्नै देशमा खोपको अभाव भएको भनेर नेपालको निजी आयातकर्तालाई खोप दिन आनाकानी गरिरहेको छ । हामीले उत्पादनक कम्पनीसँग निरन्तर कुरा गरिरहेका छौं ।’
प्रकाशित: २०७८ असार २३ गते १७:३८